लाइसेन्स प्रयोगात्मक परीक्षामा अब पैसा तिर्नु नपर्ने
काठमाण्डौ । यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षाको शुल्क नलिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले प्रयोगात्मक परीक्षार्थीका लागि गाडी उपलब्ध गराएबापत परीक्षार्थीबाट दस्तुररशुल्क असुल गर्ने काम नगराउन मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यस्तो व्यवस्था...
कांग्रेस घाटामा, बैंक ब्यालेन्स डेढ करोडले घट्यो
काठमाण्डौ । स्थानीय तहका यसअघि भएका दुवै चरणका निर्वाचनमा कांग्रेसलाई आर्थिक रुपमा पनि घाटा लागेको छ । चुनावपछि कांग्रेसको बैंक व्यालेन्स झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ घटेको पार्टी कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । साउन तेस्रो सातासम्म कांग्रेसको वाणिज्य, इन्भेष्टमेन्ट, प्रभु, प्राइम, सेन्चुरीलगायत बैंकमा रहेको खातामा ५ करोड २० लाख रुपैयाँ...
दसैंमा खसीबोका यसकारण महँगो
काठमाण्डौ । यस बर्षको दसैंमा खसीबोकाको मूल्यवृद्धि हुने भएको छ । बाढीपहिरोले बाटो अवरोध हुँदा उपत्यकामा मागअनुसार खसीबोका भित्रन नसक्दा मूल्य बढ्ने संकेत देखिएको हो । दशैंमा खसीबोकाको खपत धेरै हुने र सोहीअनुसार ल्याउन नसक्दा मूल्य बढ्ने देखिएको व्यवसायीको भनाई छ । अहिलेदेखि नै बजारमा खसीबोकाको मूल्य बढ्न थालेको छ । यो खबर आजको...
काठमाण्डौ । सधैं मागेर गुजारा चलाउँदै आएका एक ‘भिखारी’को घरको भग्नावशेष पन्छाउँदा ३ लाखभन्दा बढी रकम भेटिएको छ । विभिन्न मन्दिरमा बसेर बिहानदेखि माग्दै हिँड्ने व्यक्तिको घरमा भेटिएको रकमले निकै चर्चा पाएको छ । विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित सिंघिया खोला किनारमा बस्ने ती भिखारीको घरको भग्नावशेष हटाउँदा आइतबार बोरामा राखिएको...
निगम र व्यवसायीको मिलेमतोमा इन्धन अभाव गराउने प्रपञ्च
काठमाण्डौ । पेट्रोलियम व्यवसायी र आयल निगमको मिलेमतोमा अत्यावश्यकीय वस्तु इन्धन अभाव गराउने प्रपञ्च फेरि सुरु भएको छ। निगमले इन्धन क्षतिको विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिरहेको छैन भने व्यवसायीले सिधै ढुवानी बन्द गर्नेगरी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन्। इन्धन ढुवानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आयल निगम...
मेलम्ची अर्को दसैमा !
काठमाण्डौ । यही दसैंबाट मेलम्चीको पानी पाउने आसमा रहेका उपात्याकावासीले अर्को दसैंसम्म कुर्नुपर्ने भएको छ। दुई हजार दुई सय मिटर सुरुङ खन्नेदेखि सुन्दरीजलमा खानेपानी प्रशोधन, बाँध र पाँचतले कन्ट्रोल अपरेसन हाउस बनाउनेसम्मका काम वर्ष दिनभित्र नसकिँदा राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी पिउन दसैंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।&nb...
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले राख्दै आएका संविधान संशोधनबाहेकका अन्य माग लगभग पूरा भएका छन्। राजपा नेपालले मधेश आन्दोलनमा आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता, थुनामा रहेकाको रिहाइ, मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा, घाइतेको निःशुल्क उपचार, अशक्त तथा अपाङ्गता भएकाको स्थायी व्यवस्थापन, जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहको...
काठमाण्डौ । असोज २ मा हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनअघि नै २ नम्बर प्रदेशका केही नेता पार्टी अदलबदल गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन्। नयाँ शक्ति पार्टीका नेता रामचन्द्र झा र फोरम लोकतान्त्रिकका सहअध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले अन्य पार्टीमा आबद्ध हुने तयारी गरेका छन् भने राजपा उपाध्यक्ष अनिता यादव, सहमहामन्त्री समिम अन्सारी एमालेमा प्रवेश...
प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणका एजेन्डा तयार
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका लागि सरकारले प्रारम्भिक एजेन्डा तयार गरिरहेको छ। सूचीमा निर्वाचनका लागि भौतिक सामग्रीदेखि सैन्य सामग्री खरिदबापत तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा, युरिया मलको आपूर्तिदेखि पञ्चेश्वर परियोजनाको लाभ बाँडफाँडसम्म उल्लेख छ। प्राप्त सरकारको प्रारम्भिक सूचीमध्ये अधिकांश पुरानै...
पोथी सिंहले आफ्नो बच्चा भाले सिंहबाट जोगाउन लुकाउने गरेको त सुनिएको हो, तर मानिसले बाबुबाट सन्तानको रक्षा गराउन लुकाएको भने सितिमिति सुनिँदैन । नेपालको उच्च राजनीतिक परिवारले बाबुको सङ्गतबाट जोगाउन सन्तानलाई टाढा पुर्याउनुपरेको छ । ज्ञानेन्द्र अहिले बैंककमा हुनुहुन्छ । छोरा पारसबाहेक पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र रानी कोमल, बुहारी...
सर्वोच्चमा एक सय ६३ वटा सडक
काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले संसदीय सुनुवाई विेशेष समितिमा उपस्थित हुँदा सार्वजनिक सडकका मुद्दा छिटो टुंगो लयाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । सर्वोच्चमा सार्वजनिक सडकका एक सय ६३ मुद्दा छन् । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका करण सडकमा काम हुन सकेका छैनन् । ६ महिनाअघि सर्वोच्चमा परेका सार्वजनिक सडकका मुद्दाको...
काठमाण्डौ । रुपन्देहीको भैरहवा–परासी सडकखण्डको रोहिणी नदी किनारमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न किनेको जग्गा डुबानमा परेको छ । बिहीबारदेखि लगातार परेको पानीले रोहिणी नदी उर्लिंदा निगमले किनेको बगर जग्गा डुबाएको हो । निगमले गत असारमा रुपन्देहीको साबिकका धकधई, पट्खौली र वसन्तपुर गाविसमा करिब १४ बिघा ७ कट्ठा जग्गा...
चुनाव जिताउनेलाई मन्त्री उपहार !
काठमाण्डौ । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पार्टीलाई जिताउन सांसद्हरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले आफ्नो क्षेत्रबाट जिताउने सांसद्लाई मन्त्री बनाउने घोषणा समेत गरेका छन् । यसैगरी उनले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट चुनाव जिताउने...
काठमाण्डौ । आवश्यक गणपुरक सङ्ख्या (कोरम) नपुगेपछि व्यवस्थापिका संसद्को बैठक दुई दिनका लागि स्थगित भएको छ । शुक्रबारको बैठकको प्रारम्भमा ४७७ सांसदको हाजिर भए पनि कोरम यकिन गर्दा ९७ जना सांसदमात्र फेला परेका थिए । हाजिर गरेर ३८० सांसद बेपत्ता भएपछि सदनको बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । सांसदहरूले सदनको बैठकमा एक दिन उपस्थित...
काठमाण्डौ । वर्षा कम भएपछि यो वर्ष कुलेखानी आयोजनाको जलाशय भरिन सकेको छैन । गत वर्ष साउन तेस्रो साता १५१४ मिटर पुगेको पानी अहिले सोही अवधिमा १५०७ मिटरमात्र छ । पोहोरभन्दा अहिले कुलेखानी जलाशयमा सात मिटर पानी कम छ । अत्यावश्यक समयमा बिजुली निकाल्न कुलेखानीको पानी प्रयोग गरिन्छ । तर, जलाशयमा पानी कम भएका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले...